कागतीका बोटसंग रमाउँदै नेता थापा - Chetana Online
Chetana Online २२ जेष्ठ २०७८, 11:20 am
घोराही, २२ जेठ । घरको उत्तरतिर ३ कठ्ठा जग्गामा कागतीको मनोरम बगैंचा छ । लहरै रोपिएका सर्लक्क बढेर झुम्म परेका बोटहरुमा फूल र फल पनि उत्तिकै छन् । हरियाली एवं मोहक कागती बगैंचामा सिर्सिरे बतासले गजवको माधुर्यता थप्छ ।
घोराही १७ गुलरिया निवासी राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता सुरेश थापा लकडाउनको यो सकसमय समयमा कागती बगैंचामा रमाउँदै दिनहरु बिताइरहेका छन् । भन्छन् ‘फूल र फल लागेका कागती बगैंचामा टहल्दा आनन्द अनुभूति हुन्छ । शरीरमा एक किसिमको उर्जा र पुनर्ताजगी पैदा हुन्छ ।’
कोरोना कहरसंगै जब पहिलोपटक देशमा लकडाउन शुरु भयो जिल्ला बाहिर रहेका नेता थापा घर आए र कागतीका बिरुवा स्याहार्न थाले । थापा भन्छन् “गत वर्षको लकडाउनमा बल्ल मैले कागतीका विरुवा स्याहार्न पाएँ । मल र औषधि हालेर गोडमेल गरें । त्यसपछि बल्ल कागती सप्रिए ।“
वि. सं. २०४६ पछि राजनीतिमा सक्रिय रहेका नेता थापा यो वर्षको लकडाउनमा फेरि आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट घर फर्किएका छन् र फेरि कागती खेतीको स्याहारमा जुटेका छन् । शुरुका वर्षहरुमा त्यति राम्रा नभएका कागतीका बोट अहिले रहर लाग्दा भएका छन् । प्रायः सबै बोटहरुमा फल लागेका छन् । कागतीको व्यवसायिक खेती गर्ने योजना विस्तारै मूर्त बन्दै गएकोमा नेता थापा केहीहदसम्म संतुष्ट र रोमान्चित देखिन्छन् ।
आफ्नो अनुभव र केही सोधखोजले नेता थापाले अब कागती खेतीबारे धेरै ज्ञान हासिल गरिसकेका छन् । कागती खेतीबारेअब उनमा थप जाँगर र उत्साह बढेको छ । उनी लगत्तै थप दुई कठ्ठामा कागती रोप्दैछन् ।
“ खाल्डा खनेर तयार गरिसकेको छु । अब केही दिनमै बिरुवा रोप्ने तयारीमा छु ।“ नेता थापाले भने ।
करिव १० वर्ष अघि तत्कालीन कृषि विकास कार्यालय घोराहीमा व्यवसायिक खेतीबारे बुझ्न गएका नेता थापालाई वागबानी अधिकृत टिकाराम चौधरीले कागती खेती गर्न सल्लाह दिएका थिए । अधिकृत चौधरीले कागती खेतीका लागि दाङको माटो उपयुक्त भएको र बजार पनि राम्रो भएको बताएपछि नेता थापाले कागती खेती गर्ने सोच बनाए । कागती खेती गर्ने सोच दस वर्षअघि बनेपनि नेता थापाले त्यसको ५ वर्षपछि मात्र कागती खेती शुरु गरे ।